Category: Nin ku nacay
Zuluzil 27.10.2020 Comments
Faahfaahino ayaa ka soo baxaya Weerar toorey loo adeegsaday oo ka dhacay bartamaha magaalada Birmingham ee dalka Britain. Booliska West Midland waxay sheegeen warka ku saabsan werarkaasi uu soo gaaray qayaasti fiidkii xilliga magaaladaasi, iyada oo waxyar kaddibna la soo sheegay weerar middiyo oo kale iney dhaceen. Booliska magaalada Birmingham uu weerarka ka dhacay waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof la dilay 7 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan.
Duqa magaalada West Midland Andy Street wuxuu sheegay dhacdada iney xiriir la leedahay tii ka dhacday waddada Hurst Street in la eegi doono. Wuxuu sheegay ilaa iyo hadda inaan la garan ujeedka weerarkaasi laga lahaa. Maanta ayaana la filaya booliska iney faahfaahin ka bixiyaan dhacdadaasi.
Xafiiska Shabakada Allbanaadir. Sunday, October 11, Xubno ka tirsan Al-shabaab oo la soo taagay Maxkamad Milateri iyo xukun lagu riday Sawirro. Cabdi Cade - October 8, Somalia, as a country ravaged by conflicts, bestrode by religious extremism, rampant tribalism is heading the second in-direct election since Somalia becomes permanent government Trump tweets he and first lady Melania Trump test positive for Covid October 2, Do you want your children to learn Arabic spelling, Quran and Islamic faith?
September 27, September 16, August 27, Facebook Twitter Youtube.Murtida iyo macnaha gabayga iyo muunaddiyo luuqda, Waa martabad saroon uumiyaha Mawle wada siinne, Mulki kaleba soomaaliyeey waa ku murannaaye, Maansiyo kolkay gabay tihiyo midha la luuqeeyo, Sow Miidhayadan reer Isaaq lama mihiibsiinnin, Mankiisiyo Mullaax iyo Laf iyo gabay macaankiisa, Macdantiisi sow Eebahay naguma soo meerin. Maxamuud M Yaasiin Dheeg. Haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye Dhaqashiyo mar bay kaa yihiin dhereggu xaaraane Dhedigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele Dhadhan malaha aadmigu wuxu kugu dhalliilaaye Nin dharbaaxo quudheed dugsaday dhaqayaded maalye Dhashaaday sugtaa xaajadaad dhawrataa abide.
Shansha adhiba shirixaa danbaa shuuxa abidkiise Shahwo oday ka qaaliban abitiga shaashadii xumiye. Fulaa shiil wadnaha loogu xidhay Shamacyo naareede Anse kama shakiyo xaajadaan uur ka shaawiro'e. Cabbaar gabana meel uma fadhidid cisiyo maamuuse Hadba tol aanu ceesh milix nahaad nagu cadhaysaaye Cimrigiisa niman laasanayn looma caal helo'e.
Naf cankuurka loo yimi Rabbaa caaqibuu garanne Calool qulubtay waa yaab asaan cudur la taahayne Cidla yuurur bay dilay sidii cawsha debadeede. Cankabuudka caaradu xidhee lagu cayaaraayo iyo wiil cartii qaba intuu amar la ceeryoomay Cindallaahi waa simman yihiin waana laba cayne.
In Xasan Sheikh Soo laabanayo waxaan ku gartay 2016 – 2020
Ifka nimad u cabataad maruun ciidan ka heshaaye Camalkaaga mooyee halkaan hiil casabo joogin. Wasdi ma laha diintiyo kufriga wax u dhexeeyaaye. Legjar Faranji niman baa akhriya laawis iyo beene Oo waliba laaxima intay lib isku moodaane Ase waxan u laaqimahayaa tix ay ku luuqshaane Mar haduu Lilaahida ka baxo waa lisaan jabane. Ma laxiibto geelaba hashii lahantay jiilaale Ku laabudan shisheeye ninkii Laxawsi moodaaye. Nin laqwiyey tashigu waa ka lalay laguna leecaanye. Hadaan luqunta beri taagi jiray liicday adhaxdiiye Nin laboonti sheegtaba sabaan laarriyaa heliye.
Dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane Balse inay xasuus daran yihiin xaylka kale mooge Waxba yaanu xeerkay i marin xoolana i siine Xaasha'e nin libin kaa xistiyey xumihii waa yaabe. Xeer beegti murantaa gartay xeeli hadashaaye Xubin rag isku waajahay haday xayga ka cadaato Afku wuxu la xoog yahay magliga xawda ka jara'e. Alayle xurmo hadii aan lahaa waygu xilateene Ragbase kii aad xaradhaamisaa kuu xasaas colahe.
Wax dhaaxaan xiniinyaha ka saray mida sinnaydeene Suntaan qooshay waabeeyadaan kaaga sahay yeelay Adna inaad Samuutaha qudhqudhin waa si la hubaaye. Fircoonbaa cilmiga sheegi jirey Sheekhna ma ahayne Isaguba shirkiga Eebbeheen Shiqi gadaalkiiye. Siigada haddaan kaaga tegey salacyadii boodhka Oon Summad wejiga kaa iftiyo Soofe kugu duugey Saabaanna aan kugu xidhxidhay Sagabihii Koore Surka Xadhigga Seetada lugaa kaa sanqadhi doonta Ninkii aniga kaa igu sukhraday saac ha kuu bixiyo Waataad Siddibiq ii gashee cidi ha kaa saarto.
Haaraanka iyo faanka wayska hidda raacdeene. Aduunbaa hayaayda u guntane heeryo lagu saarye. Aduunbaa hinaayiyo u jilan haawis iyo ceebe Haadaa qabiiliga Isaaq hibo ilaah siiye. Haddaad ficil hinaasiday asaad hiilin kari weydey Ma afkaad ku hawl bixi cidlaad ka hanajabaysaaye.
Hiinraaca waa lagu yaqaan hiida doqoneede Hebednimada qaarkeed aday kuu hednoqotaaye. Dabkaad hurin habeen iyo dharaar halacyadaad oogi Halna kuma xereyside dadkaad ku hawaraysaaye Aduunbaase hor Eebbiyo la tegi halaci naareede.
Gabadh waliba waa hooyadeed tay u gurataaye Goonbaartu waxay caasidaa midaanay gaadhayne Ma gudboona gaarida sare iyo gidirta naaxdaaye. Haddii uu garkaa maro ratigu ama gugii qooqo Isagoo gulaanjiyey cidlada wuxu ka guuxaaba Markuu godoxoblaha baarqab helo gadan bidhaantiiye. Sacba waxa gunnada loogu dhigay yuu gardiidamine Haddii aan Gandaal lagu sabayn Gocay ma buuxsheene Nin gargaari jirey naagahaa gaba abiidkoode Abaal ma gude gobeybaa ka roon kuu gabraar tagae. Inkastuu garmaamiyo gucliyo gaaguf ula joogo Gurdan baqal fardaha gaadhi waa lugana kaa geeye.
Duunkeeda belo waa helaa nin u dedaalaaye Duunyadatan kama liidataan daaqi geedaha'e Iyaba waa is doontaan hadday kala dibboodaane Kulay Deeradiyo Cawsha tahay doqoni waa liide Nimanyohow tolnimo waa dugsiye dunida jeedaasha.Fadlan aqri waa faallo xog badini ku jirto. Beribaa laba wiil, oo guurdoon ahi, waxay u yimaadeen gabar. Wiilashii, ayaa gabadhii weydiiyey, habdhaqanka aabbaheed iyo kaalinta uu bulshada ku leeyahay.
Ma arrinta hadda taagan buu ka hadlaa, mise, mid soo fool lehna waxbuu ka yiraahdaa? Gabadhii intey qosol jagac ka siiyey ayey ku tiri:. Mayee, tan joogta ayuu ka hadlaa, tan kalena Eebbe ayuu u dhaafaa. Gabadhii waxay ugu warcelisay, arrin iyaga ka yaabisay, oo ku tiri:. Saadaalintu mar hibo, mar waa saansaan arag, mar waa indheergaradnimo, marna waa fiirocabbir. Qormadu waa saadaalin, ee ha ku sirmin. Ma ahan waxyi, waaran iyo wareegto, ee waa walxo isu geyn, waadixin iyo waxaab ka qaadid.
Ha u qaadan taageero iyo guulwadeyn taban. May, ha u qaadan, damjadiidayn, diin ku doogasho, doodin iyo dudsiin.
Sida ay i la tahay, Xasan waxaa lagu nacay saddax ka la ah: 1- Hoggaanxumo iyo habacsanaan. Haddii intaa lagu nacay, waxaa jira, dad Xasan qof ahaan u neceb, oo ka la ah. Xasan inta lagu nacay iyo inta neceb sokow, adigu haddaad neceb tahay, anigu ma jecli, ee ha igu soo goohin. Berri waa maanta, ee haddii aadan maanta fiirin, berri ha sugin. Ujeedku waa, Xasan wuxuu soo maray maalmo uu ahaa mudane maqsuud laga wada yahaysokeeye iyo shishiiye badi, heer laga fishay, wax aan fara ugu jirin falkiddood, may, wax uusan fahamsanayn fulintood, faalin is ka daaye.
Inta hore ugu qaldantay ama ugu qatalmay ku ma jiro, haddana, sidii aan hore u duulxulayin aan lagu degdegin dallacsiintiisaayaan maantana is ku dayaa, in aan damoodo daaha naga dedan iyo in aan daalacdo ayaamaha dambe, ee imaanaya.
Nin xil dhadhanshay, oo ka dhaqaaqay la waa, in qadaadka la qabto ama qarash lagu qubo ma ahane, si kale ku ma tagaan, Xasanna kuwii ayuu ka mid yahay. Xasan, waxaa laga gudbiyey, mooshin culus, marka laga soo tago, in lagu tilmaamay, hacabsane iyo hanfade, waxaa lagu eedeeyey qiyaamo qaran iyo jabin axdiyada dalka.
Eedeyn adag, haddii qaran jiro, haddana, qaablaawayaashii qorshahaa waday, xaggee qabteen? Aaway Goodax, oo ah ninka garan waayey, in deegaanka iyo gobolka uu ka soo jeedo, uu ka xoreeyo Shabaab, is ka daa in uu maamul u dhisee, ee ka doorbiday, in uu Xamar maqaayadaheeda ka dhexqayliyo, sidii qof falan? Maxaa aamusiyey Fawsiyo, Cosoble iyo kuwa la midka ah, ee aan horseedka ka ahaa mooshinka?. Maxaa loo joojiyey? Yaa joojiyey? Sidee loo joojiyey? Hubaal, in aysan talo Soomaali iyo tub musuqane, in ay arrintu sidaa ku dhammaato, ee gacanta shihse ka timid, waa xaggee, waase tee?
Ma carab, mise qolo kale?. Shirkii Muqdihso ka dhacay, dhammaadkii bishii toddobaad, ee ku saabsanaa higsiga ka, waxaa ka maqnaa, oo qaadacay, Cabdiwali Gaas iyo Axmad Madoobe, oo toddobaad ay Garoowe u joogeen ku gaaray, in ay qaab qalyaadaysan uga maqnaadaan shirka. Qofkii is lahaa, waxaa laga gudbay, dhaqankii loo ma dhammaha ku quusto, labo macallin dugsi iyo iskool hab dhaqankooda ka, in aan kaw iyo labo la joogin. Ka baaqsi shir kaliya ma ahane, ee waxaa ka loo dhacday, in Gaas mar shir ka socday Kismaayo, maalintii carun shubka Madoobeuu isaga istaagay, mar kalana Gaas iyo Madoobe ay shir Muqdisho ka dhacay isaga baxeen, balse, is la markii lagu soo celiyey.Aragti suubban iyo eray suugaan.
In xasan soo laabanayo waxaan ku gartay. Bar Ama Baro — Beribaa laba wiil, oo guurdoon ahi, waxay u yimaadeen gabar. Wiilashii, ayaa gabadhii weydiiyey, habdhaqanka aabbaheed iyo kaalinta uu bulshada ku leeyahay.
Ma arrinta hadda taagan buu ka hadlaa, mise, mid soo fool lehna waxbuu ka yiraahdaa?
calaamadaha lagu garto qofka aan ku rabin ama wax xiiso ah kuu qabin
Gabadhii intey qosol jagac ka siiyey ayey ku tiri:. Mayee, tan joogta ayuu ka hadlaa, tan kalena Eebbe ayuu u dhaafaa. Gabadhii waxay ugu warcelisay, arrin iyaga ka yaabisay, oo ku tiri:. Saadaalintu mar hibo, mar waa saansaan arag, mar waa indheergaradnimo, marna waa fiirocabbir. Qormadu waa saadaalin, ee ha ku sirmin. Ma ahan waxyi, waaran iyo wareegto, ee waa walxo isu geyn, waadixin iyo waxaab ka qaadid.
Ha u qaadan taageero iyo guulwadeyn taban. May, ha u qaadan, damjadiidayn, diin ku doogasho, doodin iyo dudsiin. Sida ay i la tahay, Xasan waxaa lagu nacay saddax ka la ah: 1- Hoggaanxumo iyo habacsanaan. Haddii intaa lagu nacay, waxaa jira, dad Xasan qof ahaan u neceb, oo ka la ah. Kuwo ku qabiil ah, oo quuq iyo qaaq ma ahane, aan qodob, qaanuun iyo qiyaas ku haysan. Ka sokow, in lagu qaraabto, haddana, waa is la qumman yihiin. Waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo sabadjoog.
Xasan inta lagu nacay iyo inta neceb sokow, adigu haddaad neceb tahay, anigu ma jecli, ee ha igu soo goohin.Waxaa wali socda howlgal lagu raadinayo qof bishii February meel uga tagay 29 mas, laakiin waa arrin ay ilaa hadda la yaaban yihiin dadka oo dhan. Masaska oo harqadda barkinta lasoo galiyay ayaa la dareemay iyagoo dhaqdhaqaaq sameynaya. Maqribnimadii maalintii ka horreysay munaasabadda Valentine's Day maalinta jacaylkashaqaalaha dabdamiska ee magaalada Sunderland, oo ku taalla Waqooyiga-Bari ee England, ayaa loo yeeray si ay dhacdadaas qeyrul-caadiga ah ula tacaalaan.
Goobtu waxay ahayd meel loogu talagalay in qashinka lagu rido oo ku taalla xarunta dab damiska gadaasheeda. Masaska ayaa ah nooc qiimo badan ku fadhiya. Mid ka mid ah saraakiishii dab damiska ayaa gurigiisa geeyay masaska oo maalintii ugu horreysay la helay 13 ka mid ah, si ay qandac u helaan. Maalintii xigtay ee kii February, waxaa la arkay mid ka mid ah masaskii oo aan nooleyn, laakiin tii kale xaaladdooda way fiicneyd.
Halkaas markey xaaladdu mareyso ayaa loo yeeray Trevor Walker. In kastoo uu ka shaqeeyo magaalada ku dhow Sunderland ee Newcastle, haddana wuxuu ka mid yahay dadka khubarada ah ee ku xeel dheer dabeecadaha masaska. Uma maleynayo inay ku faraxsanaan lahayd haddii ay ogaan lahayd. Kaddib markii uu xarunta masaska lagu xannaaneeyo geeyay, Walker wuxuu ku mashquulay arrimaha qoyskiisa. Hase ahaatee maalintii ku xigtay, isagoo telefoonkiisa eegaya ayuu arkay war kale oo ku saabsan qeylo qaan la xiriirta masas.
Harqado kale oo ay masas ka buuxaan ayaa looga tagay isla meeshii masaskii hore la dhigay. Wuxuu dhaleeceyn u jeediyay dadka masaska xannaaneysta ee iska soo qubay xayawaankaas, dadka kalena ku cabsi qaliyay. Labada jeer ee masaska la helay ayaa soo jiidatay indhaha shacabka iyo warbaahinta, waxaana aad loola yaabay sababta arrintaas ka dambeysa.
Waxaa kale oo lala sii fajacay waxay ahayd in masaska lagu soo aaddiyay hal maalin oo ka horreysay maalinta jacaylka iyo maalintii ka dambeysay. Inkastoo kiyaastiioo mas guryaha lagu xannaaneysto guud ahaan qeybaha kala duwan ee UK, kharash yar kuma baxo in qofku uu jabiso ama mas keensado guriga. Hay'adda qaabilsan xannaanada xayawaanka xamaaratada ah ee magaceeda loo soo gaabiyo RSPCA ayaa shacabka kula talisay in masaska halkiiba meel gaar ah lagu hayo, qalabka loogu talagalay ee la dhex galiyana ay ahaadaan kuwo ku filan oo aan ciriiri ku ahayn.
Waxay khubarada masaska xannaaneeya aaminsan yihiin in dhacdadan aysan ku saabsaneyn qof masas uu lahaa nacay oo iska soo tuuray, balse ay ujeeddo kale meesha ku jirto, taasoo aan la garaneynin.
Chris Newman, oo ka tirsan laanta qaran ee xayawaanka xamaaratada ah ayaa isagana qaba fikirka sheegaya in masaska la dayacay ay ka dambeyso ujeeddo layaab leh. Sida uu sheegay Walker, ilaa hadda wax garab ah lama weydiisanin booliska. Boolis raadinaya nin masas badan barkin dhex geliyay.
Masas madaxweyne ku kallifay inuu xafiiskiisa ka cararo Nin mas qaniinyadooda u badheedhay si uu dawo aadamaha badbaadisa u helo. Markan waxay ahaayeen 16 mas oo ku kala jiray labo harqadood. Ma waxaa soo socda warkii ugu weynaa ee ku saabsan Carabta iyo Israa'iil? Labo diyaaradood oo isku dhacay xilli ay hawada ku jireen 8 Saacadood ka hor.Nin 31 jir ah oo u dhashay dalkaasi Ingiriiska kaasoo lagu magacaabo Brain Lewis ayaa si caro leh dunidii dhameyd ba uga haajiriyay Ooridiisa u dhixi jirtay, ka gadaal markii uu ku nacay isticmaalka waxa loogu yeero bogga calaf doonka ee Facebook-ga loo yaqaano, taasoo si aad ah haatan dunida daafaheeda looga isticmaalo.
Arrintaasna uu ka qaaday maseyr xoog badan oo ku dhalisay inuu miyirkiisii waayo isla markaana u geysto fal xanuun badan oo aysan sinaba uga soo waaqsan. Dhinaca kale, qareen ka doodayay dhacdada ninkan Lewis la yiraahdo ayaa soo bandhigay cadeeyno la xiriira in haweeneyda Hayley ay si hoose u isticmaali jirtay internet-ka isla markaana ay rag badan kala sheekeysan jirtay Facebook-ga.
Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Create a free website or blog at WordPress. WP Designer. Rate this:. Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public.
Mr, Ducaale waxaa lagu xasuustaa in uu Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo uu geeyey gobalka Soomaalida uu ku sheegay in uu yahay ruux beesha Daarood ah, taas oo ay dad badan aad uga soo horjeesteen oo ay u arkayeen loolan siyaasadeed.
Ragga ay is hayaan Aaden Barre Ducaale, marar badan ayay ka gudbiyeen dhaliilo xoog leh, oo ay ku sifeeyeen nin aan dooneyn in xaquuqda uu leeyahay gobalka Waqooyi Barri Kenya uu helo, waxaana uu horey aad uga soo horjeestay qodobada ku saleysan xaga waxbarashada.
Mr, Ducaale caqabadaha uu haystay mudadii uu xilkan hayay waxa kamid ah dagaalka Al- Shabaab ee gobalkas ka bilowday xiligiisii, kaas oo sabab u ahaa ciidamada Kenya ee jooga Jubbaland, kuwaas oo katirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Laakiin, ciidankaas ayaa lagu sifeeyaa badankoodu in aysan ku joogin sifo sharci ah, si lamid ah dawladda Itoobiya oo ciidamo badan ay ka joogaan gudaha Soomaaliya, kuwas oo ku gabanaya magaca howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Doorashadii Soomaaliya ee Madaxweyne-nimada ay u doorteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu Aadan ka mid ahaa dadka aadka u taageeray, ilaa uu gaaray in xubno katirsan mucaaradka dawladda Faderaalka Soomaaliya u diido in ay shirar ku qabsadaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi.
Laakiin xariirkas ayaa xumaday, markii Xukuumadda Faderaalka ay shaqada ka saartay mid kamid ah ehelada Aden Barre Ducaale oo ahaa wasiir katirsanaa Xukuumadda Faderaalka, kaas oo lagu eedeyeey musuqmaasuq, ayna kaliftay in xilkiisa laga qaado. Aden wuxuu si toos ah u taageeray doorashadii Axmed Madoobe, isagoo Kenya ku cadaadiyey in ay qeyb weyn ka noqoto in aan la bedelin Axmed Madoobe, wuxuuna dadaal badan galiyey sidii loo joojin lahaa qorshe kasta oo ay faragalin doorashadas ku sameyso dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Duulimaadyada Hawada ee Soomaaliya oo laga mamnuucay in ay tagaan Kenya ayaa duulimad gaar ah uu ku tagay, taas oo ahayd jabinta sharciyadda Xukuumadda Faderaalka, isagoo waliba kasoo jeeda dal Shisheeye oo ay Soomaliya diblumaasiyada isku hayaan.
Kalmada caan-baxday ee Aaden Uunsi ayaa ka raacday madashii Caleema-saarka Axmed Madoobe oo ay isku jifo yihiin, ka sokowna uu dagaal adag u galay sidii uu xilkaas u heyn lahaa, laakiin Axmed kuma heyn Karin kursiga Aqbaliyada baarlamaanka Kenya oo ugu dambeyn maanta uu seegay. Sidaas oo kale Aadan Barre Ducaale, waxaa lagu xasuusan doonaa in uu ku eedeeyey Soomaaliya in ay doonayso in ay qaadato Badda Kenya, isagoo xiligaas ka hadlayay muranka xagga Badda ah ee ay Kenya ku doonayso in ay ku qaadato qeyb kamid ah Biyaha Soomaaliya.
Wareysi uu maanta oo Isniin ah siiyay laanta Afsoomaaliga ee BBC-da ayuu Aadan Ducaale ku sheegay in mowqifkiisa ku aaddan khilaafka badda uu kala mideysan yahay dowladdiisa. Ugu dambeyn, Aaden Barre Ducaale ayaa maanta macsalaameeyey kursiga Gudoomiyaha Aqbaliyadda oo uu hayay 8dii sanno ee lasoo dhaafay, dad badan oo aragtidooda ka dhiibtay baraha bulshada ayaa ku faraxsanaa ceyrinta Aaden Barre, kuwaas oo u arkayay in uu ahaa ruux Soomaalinimadiisa shaki galiyey oo la saftay Kenya oo uu dhalashadeeda haysto.
Qof kasta soomaaliweyn godob ka galay waan ku farxaan nahay in si xun xilka looga tuuro sida aadan uunsi ku dhacday. Waa Dameeer si xun loosoo rartay markii lagadanaystay dadkiisiina la nacsiiyey ayaa lasoo tuuray.
Ka lagu bedeli doonaana waxa uu noqon doonaa DAMEER carcartiisa qaba oo u diyaara in si fiican loo rarto oo heeryada halkaa ka qaad. Cagdheer weligoodba waa Gumeysi ku hoos noolayaal damiir lahayn. Alleylehe Bagah oo bagah, waa isagii shalay lahaa somali ma ihi maantase muxuu odhan doona!?!!
Aadan waa ninka suurtageliyey in Kenya ninka soomaaliyeed uu noqdo ninka saddexaad ugu awooda badan dalka Kenya, in ganacsatada soomaalida ay lawareegaan ganacsigii dalka kenya, in ninka soomaaliyeed uu sharaf iyo heybad ku yeesho gudaha dalka Kenya. Wuxuu Aadan ugu jawaabey adiga iyo labadaada wiil hadda jooga Kenya waxaan kugu oran lahaa codkiina siiya Faarax Macallin haddaan ku ogahay wax yar oo dadnimo ah.
Islaantii inteey ilmeysey beey ku tiri qabiilow ku nacay….
Kuwa hadda social media ka caynaya Aadan Barre waxay u badan yihiin hawiye, iidoor iyo daarood wax ma garato ah oo u quuriwaayey sidee buu nin daarood ah heerkaas u gaarey. Aadan dawladdii Farmaajo aad buu u soo dhoweeyey laakiinse markuu arkey Farmaajo in uu yahay nin xanuunsan buu dhinac uga leexdey. Barre beenlow illahay ka furtay. Ma ninja walaalkii soo koriyay police ay sidii aygii lug iyo gacan ka xireen markuu la hadlay ku yiri waxba kuuma qaban karo ayaa wax qabtay.
Somalida Kenya lacagtooda ayay ku joogaan Kenya. Adiga iyo isaga Kenyan isku mid bay idiin arkaan,lacag kii haystana kaasaa xoog roon. Adan Duale: Sida qof kasta oo siyaasi ah,wanaag iyo xumaan ba waa leeyahay,wax badan,Soomaalida ku nool Kenya waa uu taray,oo arintaasi waa lag amaani. Tan xumaanta ugo wayn ee taariikhda ugo jirta,ayaa ah in uu yiri,waa in ciidamada qalabka sida ee Kenya loo diro xuduuda,Bada ee Soomaaliya iyo Kenya isko,hayaan oo xoog logo xaliyo,wuusan ogayn in Soomaaliya aan dhul iyo bad ay leedahay,aan cidina qaadan karin.
U Sii Gudbi Asxaabtaada. Soomaalida waa dad iska aragti gaaban oo uu caqliga lugaha kaga jiro. Aadan Barre Ducaale wuxuu soomaali u qabtey cid u qabatey ma jirto. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Leave this field empty.
Path of diablo rune drop rate
Replies to “Nin ku nacay”
Nin ku nacay | Designed by: Theme Freesia | WordPress | © Copyright All right reserved